ग्रीन लाइफ हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति कित्ता भर्ने ? | Ratopati
ग्रीन लाइफ हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति कित्ता भर्ने ?
personएलिजा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २३, २०७७ chat_bubble_outline0
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला भएको छ । माघ २३ गते देखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ३५ लाख ९६ हजार ४ सय कित्ता आईपीओ बिक्री गर्दैछ । यसमध्ये ६९ हजार ९ सय २८ कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारी र १ लाख ७४ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी ३२ लाख ५१ हजार ६ सय ५२ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिने सक्नेछन् ।
न्यूनतम १० कित्ताका दरले बाँडफाँट हुँदा जम्मा ३ लाख २५ हजार १ सय ६५ जना लगानीकर्ताले मात्र आईपीओ हात पार्ने देखिन्छ । ग्रीनलाईफको आईपीओमा १० कित्ता आवेदन दिए पनि पुग्ने देखिन्छ ।
कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयले नकिनेको सेयरसमेत थप गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेको हो ।